Ciidanka Xoogga Dalka oo Shabaab ka saarey deegano katirsan Shabeelooyinka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Xoogga Dalka oo Shabaab ka saarey deegano katirsan Shabeelooyinka
Ciidanka Xoogga Dalka oo Shabaab ka saarey deegano katirsan Shabeelooyinka
Howlgaladani oo ay ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ka wadaan deegaano katirsan Gobolada Shabeelooyinka ayaa waxaa Maleeshiyaadka Shabaab looga saarey deegaano dhowr ah oo katirsan labada Gobol.
Waxaa hoggaaminaya howlagaladaasi Abaanduulaha Ciidanka Xooga Dalka Janaraal C/llaahi Cali Caanood iyo abaanduulaha qeybta 12ka April Janaraal MAxmuud Maxamed Koronto kuwaasi oo ciidamada ku dhiiro geliyay in Shacabka ay ka difaacaan cadowga Umadda Soomaaliyeed ee Shabaab.
Janaraal C/llaahi Cali Caanood ayaa wakaaladda SONNA u sheegay in ujeedada guud ee howlgaladan ay yihiin sidii kooxda Shabaab looga sifeyn lahaa waddooyinka isku xira Gobolada Shabeelada Hoose,SHabelada Dhexe iyo deegaanada ku xeeran oo inta badan Shabaab ay dadka ku dhibaateeyaan.
Howlgaladani ayaa ku so beegmaya xili todobaadyadii la soo dhaafay Maleeshiyada Shabaab ay dad shacab ah ku laayeen miinooyin ay dhulka ku aaseeyen oo ay ku dhinteen dad shacab ah oo wadada isku xirta labada gobol ku safrayay.
Previous articleMadaxda Soomaliya oo go’aan midaysan dul dhigtay sariikiisha AMISOM+ Sawirro
Next articleDowladda Federaalka Soomaaliya, Danjireyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya iyo AMISOM oo ka wada hadlay qorshaha abaabulka dagaalka Alshabaab